Flyers Rights to FAA: Break secrecy pact with Boeing, release 737 MAX documents | Aviation News
Ikhaya » Iindaba zeAnga » Amalungelo amaFlyers kwi-FAA: Yaphula isivumelwano sokugcina imfihlo kunye neBoeing, khupha amaxwebhu angama-737 MAX
Amalungelo amaFlyers kwi-FAA: Yaphula isivumelwano sokugcina imfihlo kunye neBoeing, khupha amaxwebhu angama-737 MAX
IFlyersRights.org ifake isindululo sokuGweba ngokuShwankathelayo kwityala layo le-Freedom of Information Act (FOIA) ngokuchasene ne FAA. I-Flyers Rights Education Fund v. FAA, (DDC CV-19-3749 (CKK)). Ifuna ukubhengezwa kwamaxwebhu e-FAA ngokubhekisele ekucetyisweni kwe-737 MAX, ke iingcali ezizimeleyo kunye noluntu banokujonga isiseko apho I-FAA ijonge ukungangqinelani nenqwelomoya.
Iinqwelo-moya ezimbini zeBoeing 737 MAX zaphazanyiswa zingaphelanga iinyanga ezintlanu omnye nomnye ngasekupheleni kuka-2018 nangasekuqaleni kuka-2019, zabulala bonke abakhweli kunye nabasebenzi abangama-346. IFlyersrights.org, umbutho omkhulu wabakhweli beenqwelomoya, wafaka ityala le-FOIA ngoDisemba 2019 emva kokuba i-FAA ingakhathalelanga okanye ikhathalele izicelo ezininzi ze-FOIA zamaxwebhu angama-737 MAX.
Isicelo sokuxelwa kwe-FAA sixhaswe luluhlu olubanzi lweengcali ezizimeleyo zokuhamba ngenqwelomoya kunye nomdla, kubandakanya:
UMichael Neely (iminyaka engama-20 noBoeing njengenjineli yenkqubo kunye neenjineli zeprojekthi),
UJavier de Luis PhD (iminyaka engama-30 yamava njengenjineli ye-aeronautical kunye nomphathi, umhlohli weMIT),
URichard Spinks (iminyaka engama-38 yamava kwinkqubo yokhuseleko, ubunjineli boomatshini),
UDennis Coughlin (iminyaka engama-31 yamava njengengcali ye-avionics kunye nomqeqeshi),
UAjit Agtey (iminyaka engama-40 yamava njengomqhubi wenqwelomoya kunye nomqhubi wenqwelomoya, kunye noMqhubi oPhezulu woVavanyo oyiNtloko woMkhosi woMoya waseIndiya)
UDaniel Gellert (iminyaka engama-50 njengomqhubi wenqwelomoya wenqwelomoya, umqhubi wovavanyo we-Boeing, kunye negosa le-FAA),
UGeoffrey Barrance (iminyaka engama-30 yamava njenge-avionics, isakhelo somoya kunye nenjineli yezokhuseleko),
UGregory Travis (ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava njengesazinzulu / umphathi wesoftware yekhompyuter, umqhubi wenqwelomoya wabucala),
UChesley “Sully” Sullenberger (iminyaka engama-37 yamava njengomqhubi wenqwelo-moya kunye nomqhubi wenqwelomoya, iminyaka eli-10 njengomcebisi wezokhuseleko kwezombutho kunye nombhali, obhiyozelwa ukufika ngempumelelo kwenqwelomoya yabakhubazekileyo kuMlambo i-Hudson),
UMichael Goldfarb (ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava njengomcebisi ngezokhuseleko kwezomkhosi kunye nowayesakuba ligosa lomgaqo-nkqubo wokhuseleko kwezokundiza), kunye
USara Nelson, umongameli wombutho omkhulu wabasebenzi beenqwelomoya wenqwelomoya wabahambi ngenqwelo moya.
Ngokudibeneyo, ezi ngcali zineminyaka engaphezu kwama-400 yamava. Bonke baqinisekisa ukuba akunakwenzeka ukumisela ukuba oku kulindelweyo kwi-MAX kukhuselekile ngaphandle kokuchazwa kweenkcukacha zokulungiswa kwe-Boeing MAX kunye novavanyo lwe-FAA.
Kwisithuba seenyanga ezisi-7, i-FAA ivelise malunga namaxwebhu ali-100 (ngaphezulu kwamaphepha angama-8,000), abephelele okanye ephantse alungiswa ngokupheleleyo kwindawo yolwazi (FOIA Exemption 4). La maxwebhu afaka ulwazi olungaqwalaselwa njengelungelo lokushicilela, njengeendlela zokuthotyelwa kwemigaqo yomanyano.
UPaul Hudson, uMongameli weFlyersRights.org kunye nommeli wexesha elide wokhuseleko kwezokundiza, uqukumbele ngelithi, “Iingozi ezimbini ezingama-737 MAX ziphawule ukuphela kolawulo lwe-FAA njengomgangatho wegolide wokhuseleko kwezokubhabha. I-737 MAX debacle ityhila ubunkokeli be-FAA ngokubanjwa ngomzi mveliso. Ukusukela ngeyoKwindla ngo-2019, i-FAA kunye neBoeing baphindaphinda baqinisekisa uluntu ukuba kuzakubonakala ngokucacileyo. ”
“I-Boeing ifihle amaxwebhu kwi-FAA nakwiinqwelomoya ukuze zifumane i-737 MAX ekuqaleni eqinisekisiwe njengekhuselekileyo. Ngoku, ngaphandle kweziqinisekiso ezininzi ze-Boeing CEO uCalhoun kunye namagosa e-FAA ukuba kuyakubonakala ngokucacileyo ukuya phambili, iBoeing kunye ne-FAA bafuna ukugcina onke amaxwebhu ayo eyimfihlo, kwaye i-FAA ifuna ukuyigcina iyimfihlo yonke idatha yovavanyo.
"I-FAA yenqabile ukuphumeza izindululo ezizimeleyo zoPhononongo lobuGcisa obuHlanganisiweyo (JATR), kwaye ngoku i-FAA ifuna ukunqumamisa ithuba lokugqibela lokuphononongwa ngokuzimeleyo kwe-Boeing MAX," uqhubeke uPaul Hudson. "Ukuba iBoeing kunye ne-FAA bafumana indlela, i-737 MAX iya kungqongwa ngokukhawuleza ngaphandle kokuphononongwa ziingcali ezizimeleyo, nangaphandle kokuphunyezwa kwezindululo zeJATR"